25 | July | 2008 | Save Burma
အမေရိကန် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံနဲ့ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ်ရုံး လှမ်း(၁) မှာ စစ်ဦးစီးမှူး ဒုတိယတန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်က ဒီဗွီဘီ ဌာနနဲ့ အင်တာဗျူး လုပ်ခဲ့တဲ့ ဗွီဒီယိုကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်မှ ကျွန်တော်ထံ ပေးပို့လာပါတယ်။ ဤ ဗွီဒီယိုမှာ ဒီပဲယင်း ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွှန့် သဘောထားကွဲလွဲပုံတွေ၊ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်က အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဗိုလ်သန်းရွှေအား ကြိုတင်သတင်း မပို့ဘဲ ရာဇာလီကို ရန်ကုန်သို့ ခေါ်ယူပုံတွေ၊ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်အား ဗိုလ်သန်းရွှေက အာဏာထိန်းချုပ်လာပုံတွေ၊ အမျိုးသားညီလာခံစတင်ပါက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်မဲ့အစီအစဉ်တွေကို ခရေစေ့တွင်းကျ တင်ပြထားပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ယခုလိုပေးပို့လာတဲ့ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်ကို ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါတယ်။
Post link :http://photayokeking.blogspot.com/2008/07/blog-post_25.html
Tagged with ဗိုလ်မှူးအောင်လင်း�
ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များက နအဖ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံ၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးသာ လက်ခံမည်
Tagged with တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ, ရွေးကောက်ပွဲ
Five 1990 elected people’s parliament representatives have declared their opposition to the upcoming 2010 elections and said they will only participate inapolitical process based on dialogue.
Pu Cin Siang Thang, elected PPR for Chin state’s Tee Tain township and member of the Committee Representing the People’s Parliament, Kant Balu township PPR U Thein Pe and National League for Democracy representatives Dr Myint Naing from Kant Balu, U Nyint Pu in Arakan’s Taunggok and Dr Tin Min Htut from Pantanaw, Irrawaddy, said current international policies towards Burma were misguided.
The five said they appreciated calls by world leaders for the Burmese junta to allow all political parties to participate in the 2010 election and to ensure it was conducted inafair and independent manner, but said the calls betrayedalack of understanding of the real situation and the need for dialogue.
The representatives have draftedaletter to United National secretary-general Ban Ki-moon expressing their concern about the weakening of the UN’s stand on Burma, citing the change in 2003 from the UN’s original aim of bringing about national dialogue to now urging all groups to join the government’s road map to democracy. Pu Cin Siang Thang said the situation had worsened since this change of policy and called forastrengthening of the UN’s role in Burma issues.
He said that even though the letter to Ban Ki-moon had only been signed by five of them, the opinions expressed were shared by more than 100 other PPRs.
“We did not have time to collect all their signatures as we wanted to send this before the UNSC and ASEAN meetings as well as the ASEAN Regional Forum,” said Pu Cin Siang Thang.
“The letter was also sent to the office of the UN deputy secretary, to Mr Gambari, to the US secretary of state and to the US first lady.”
The group said in their statement that the elected representatives hadavital role in developing national reconciliation and democracy in Burma, but would not recognise the new constitution or play any part in the government’s seven-step road map.
Tagged with Ban Ki-moon, Burma, Election, Junta UN, Myanmar